Ady & Fifandirana · Oktobra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Oktobra, 2011
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Oktobra, 2011
Afrika Mainty 31 Oktobra 2011
Nandritra ny disadisa nialoha ny fifidianana tao Côte d'Ivoire, ireo anjerimanontolo telo ao amin'io firenena io (Cocody, Abobo-Adjamé sy Bouaké) dia nakatona ary tsy nasiana olona tany amin'ireo toeram-ponenan'ny mpianatra. Raha betsaka tamin'ireo Ivoariana no nadray izany fanapahan-kevitra izany tamin'ny lafiny tsara, amin'izao fotoana kosa dia maro ireo mametra-panontaniana manoloana ny manjavozavo mikasika ny ho fanokafana indray ireny anjerimanontolo ireny. Mandroso vaha-olana fiandry ny mpampiasa aterineto.
Libia: Ny Marina Momba Ny Fahafatesan'i Gaddafi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Oktobra 2011
Mifety i Libia iray manontolo satria lavo ny toeram-pamaharana mafy fotrotr'i Gaddafi, Sirte ary, na ny tenany voasambotra dia novonoina, na novonoina dia voasambotra. Mbola manjavozavo ny antony nahatonga ny fahafatesany, sady vitsy no mifanipaka ireo andinindininy. Ao amin'ny Twitter, miezaka mamerina manangana ny antony nahafaty azy ireo mpanao gazety sy mpitoraka bilaogy.
Libya: Vaovao Tsy Voamarina Fa Voasambotra i Gaddafi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Oktobra 2011
Vaovao mahafaly no re avy any Libya tao anatin'ny minitra vitsivitsy izay, ka nahatonga ny mpisiokantsera Libyana sy Arabo hifaly, amim-pitandremana, manaraka ny fivoaran-draharaha. Honohono milaza fa voasambotra ny mpanao didijadona Libyana Muammar Al Gaddafi. Izao ny domberina hita voalohany.
Isan'ny fotoan-dehibe iray eo amin'ny tantara Israeliana ankehitriny ny fiverenan'i Gilad Shalit. Gilad Shalit, miaramilan'ny IDF (tafika Israeliana) dia nafahan'ny Hamas rehefa notanany nandritra ny 1.941 andro, ho takalon'ny gadra Palestiniana 1.027. Indreto ny sasantsasany amin'ny fanehoan-kevitra avy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Hebreo.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Oktobra 2011
Tanatin'ny valo volana nanaovan-dry zareo fanoherana am-pilaminana, fakàn-tahaka ho an'ny rehetra ny Yemenita, tsy ho an'ny Arabo fotsiny fa ho an'izao tontolo izao mihitsy. Na dia firenena Arabo mahantra indrindra aza, nasehon'ireo lehilahy sy vehivavy Yemenita ny maha-manankarena azy ireo amin'ny resaka fahasahiana, faharetana ary fijoroana tsy azo hozongozonina, saingy ny tena nampihaiky volana izao tontolo izao dia ny fahatonian-dry zareo.. Noon Arabia dia manolotra haja manokana ho an'ireo vehivavy Yemenita ato anatin'ity lahatsoratra ity.